‘गायिका नभएकी भए सरकारी जागीरे हुन्थेँ’ « Drishti News – Nepalese News Portal
‘गायिका नभएकी भए सरकारी जागीरे हुन्थेँ’
२ आश्विन २०७८, शनिबार 10:55 am
सानोमा खुबै नाच्थिन् । त्यहीअनुसार उनी फिल्मीकी हिरोइन हुनुपर्ने हो, तर गायिका बनिन् । डेढ दशकयता गायन क्षेत्रमा सक्रिय सीता राना मगर भन्छिन्, ‘स्कुलले जीवनमा नाच्ने रहर भएपनि हिरोइन र मोडल बन्ने इच्छा जागेन ।’ गुल्मीमा जन्मिएकी गायिका सीताले बुटवल र काठमाडौं आलोपालो बसेर आफ्नो सांगीतिक करिअरलाई अगाडि बढाइरहेकी छन् । औपचारिक गायनयात्रा २०६१/०६२ देखि सुरु गरेकी सीताले यहाँसम्म पुग्दा साढे दुई दर्जनभन्दा बढी गीत गाइसकेकी छन् । सीताले जतिखेर गायन करिअर सुरु गर्दै थिइन्, त्यो समय दोहोरी गीत प्रतियोगिताको लहर चलेको थियो । त्यही समय आफ्नै शब्द संगीतमा ‘सँगै जिउने’ बोलको गीतमार्फत सांगीतिक यात्रा तय गरेकी सीताका अधिकांश गीत चर्चित छन् । गायिका सीता राना मगरसँग एमपी सुब्बाको जम्काभेट :
तपाइँले गाउन सुरु गर्नुभएको कति भयो ?
स्टेजमा गाउन थालेको डेड दशक बढी भयो । २०६१/०६२ सालदेखि मैले गाउन सुरु गरेकी हुँ । त्यसअघि नाच्ने गर्थे । सानोमा नाचगान भनेपछि म हुरुक्कै हुन्थेँ । स्कुलमा आयोजना हुने हरेक कार्यक्रममा मेरो प्रस्तुती रहन्थ्यो ।
नाच्न रुचाउने मान्छे कसरी गाउनतिर लाग्नुभयो ?
सानोमा नाच्न र गाउन मन पर्दथ्यो । अलि अलि गाउँथे पनि । स्कुल पढ्दाखेरी बढी नाच्थेँ । तर, विस्तारै गाउनतिर मन गयो । त्यो बेला दोहोरी गीत प्रतियोगिताहरुको लहर नै चलेको थियो । २०६२ सालमा बुटवलमा दोहोरी गीत प्रतियोगिता भएको थियो । मैले पनि ती गायन कम्पिटिसनमा गाएँ । दोहोरी गीत प्रतियोगितामा गाउँदा गाउँदै गायनतिर लागेँ ।
तपाइँको औपचारिक गायनयात्रा त्यहीँबाट सुरु भएको हो ?
त्यसै भन्नुपर्ला । २०६२ तिरै विष्णु माझीसँग एउटा गीत गाएकी थिएँ । त्यो बेला क्यासेटको चलन थियो । तर, नयाँ कलाकारको गीत कम्पनीहरुले लिन आनाकानी गर्थे । त्यसैले नयाँ कलाकारका लागि गाह्रो थियो ।
तपाइँको पहिलो गीत कुन हो ?
सुरुमै मैले आफ्नै शब्द तथा संगीतमा ‘सँगै जिउने’ बोलको गीत गाएकी थिएँ । त्यो गीत हिट भयो । त्यसपछि अरु गीत गाउन थालेकी हुँ । त्यो बेलादेखि म निरन्तर गीतसंगीत क्षेत्रमै छु ।
अहिलेसम्म कति गाएँ भन्ने याद छ ?
ठ्याक्कै याद नभएपनि दुई दर्जनभन्दा बढी गाएँ होला जस्तो लाग्छ । मैले संख्यात्मक रुपमा धेरै गीत गाएकी छैन । तर, जति पनि गाएँ, ती गीतहरु दर्शक तथा श्रोताले रुचाइदिनुभएको छ । त्यसैमा खुसी छु ।
तपाइँका रुचाइएका गीतहरु भन्नुपर्दा ?
थुप्रै छन् । मलाई केटो चाहिएको पैसा हुनेवाला हो, सरी ल, तीजका गीत केटा गाए, नौतुनाको रेललगायत छन् । ती गीतले नै मलाई गायिका सीता राना मगर भनेर चिनिएकी छु । मेरो हालसालै ‘हिस्सी परेको’ बोलको गीत आएको छ । त्यो गीतबाट राम्रै प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
नाच्न खपिस हुनुहुन्छ, हिरोइनका लागि प्रस्तावहरु आएन ?
नाच्थेँ । तर, मलाई सुरुबाटै फिल्मको हिरोइन बन्ने रुची जागेन । कतिपयले आफ्नो गीतमा मोडलिङ गर, राम्रो हुन्छ भन्छन् । तर, मलाई मोडलिङ गर्ने इच्छा भएन । अलि अलि आफ्नो गीतमा नाचेकी छु । तर, अरुहरुको गीतमा मोडलिङका लागि अफर आयो भने गर्दिनँ । म गायनमै ठीक छु ।
आफ्नो पेसाबाट खुसी हुनुहुन्छ ?
खुसी छु । दर्शक तथा श्रोताको अपार माया पाएकी छु । यो भन्दा बढी मेरो लागि खुसी नै हुनुसक्छ र ? गायिका सीता राना मगर भनेर चिनिएकी छु । यसैबाट सन्तुष्ट छु ।
गायिका नभएको भए के बन्नु हुन्थ्यो ?
मलाई सानैदेखि कलाकार बन्ने इच्छा थियो । यदि त्यो इच्छा पूरा नभएको भए सरकारी जागीरे हुन्थेँ होला । किनकि, सरकारी जागीरे भएर देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने म मा त्यसबेला धारणा थियो ।
अवार्ड कार्यक्रमबारे तपाइँको धारणा के छ ?
म अहिलेसम्म अवार्डमा सहभागी भएकी छैन । अवार्ड पाएर मात्र कलाकार हुने होइन । यो अवार्ड होइन, कवार्ड हो भन्ने लाग्छ । अवार्ड पैसामा किनबेच हुन्छ भन्ने सुनेकी छु । त्यसैले म त्यस्ता अवार्डमा सहभागी हुन्न ।
सिंगल हुनुहुन्छ, प्रेम प्रस्ताव कतिको आउँछ ?
त्यो भन्नै पर्दैन । कति आइरहेको हुन्छ । पागल बन्ने खालका प्रेम प्रस्तावहरु पनि आउँछ । भनेर साध्य छैन ।
लाहुरेहरु पनि माग्न आए होलानन् नि ?
धेरै जना आए । तर, त्यो बेला पढेर आफैँले केही गरौँ भन्ने सोचेँ । परनिर्भर होइन, म आत्मनिर्भर चाहने मान्छे हुँ ।